Minisiteran’ny fahasalamana Miantso ny olona tsy hanjifa fanafody eny anelakela-trano intsony
Anisan’ny toerana malaza fividianana fanafody tsy ara-dalàna ny eny Ambohipo. Betsaka ireo efa voafitaka tamin’izany raha araka ny fanadihadiana natao satria tratry ny fanafody efa lany daty nefa mbola tsy mety fay fa mbola mividy eny an-toerana ihany.
Mora mantsy ny fanafody eny an-toerana amin’ny ankapobeny no sady ahitana karazany maro. Nanomboka nanentana ny olona tsy hividy fanafody eny an-toerana intsony ny minisitry ny tontolo iainana Georget Alexandre omaly fanentanana iarahany amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Nambarany fa misy amin’ireny karazam-panafody hamidy eny anelakela-trano ireny no tsy tena izy intsony ka ilana fitandremana tsara. Inoana fa hisy ny fepetra hentitra horaisin’ireto minisitera roa ireto manomboka izao hanafoanana ireny varotra fanafody tsy ara-dalàna eto amintsika ireny.